Fampandrosoana · Jolay, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Fampandrosoana · Jolay, 2013
Tantara mikasika ny Fampandrosoana tamin'ny Jolay, 2013
Brazila : Manokatra Ivontoeram-panabeazana ho an'ny indizena ny Foko Breziliana iray
Brezila 21 Jolay 2013
Ela ny ela ka nisokatra ihany ilay ivontoeram-panabeazana iray naorin'ny foko Paiter-Surui [en] any amin'ny faritra breziliana any Amazonia, izay hanome fanofanana arak'asa ireo indizena any amin'ny faritra. Manantena izy ireo fa hisy andiana tranobe hatsangana mba ho faritry ny anjerimanontolo ho an'ny foko Paiter-Surui any Brezila, tsy manam-paharoa any amin'ny firenena.
Fa Maninona i Madagasikara no Tsy Afa-Mametraka Datim-Pifidianana?
Afrika Mainty 10 Jolay 2013
Efa-taona izay ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila nidiran'ny firenena tamin'ny krizy politika tamin'ny 2009, tsy mety mahita ny lala-kivoahana i Madagasikara.
Ilay Vavy Antitra sy ny Ovy: Niparitaka ny Tantaran'ny Fahantran'i Ukraine
Eoropa Afovoany & Atsinanana 08 Jolay 2013
Olena Danko, mpanao gazety dia nanoratra lahatsoratra fohy momba ny fifanenany tamina vavy antitra iray tany an-tsena izay tsy nanana afatsy vola kely mba hividianana singan'ovy tokana. Tantara mampalahelo hahalalana an'i Ukraine izany, izay tsy mahagaga intsony ny olona izay efa nonina tany amin'ny firenena na dia nandritra ny fotoana fohy aza. Saingy tanaty ora vitsy monja dia efa niparitaka...
Kambodza : Sarintany Mampiseho Ireo Faritra Tratran'ny Fahatapahan'ny Herinaratra
Azia Atsinanana 06 Jolay 2013
Nahatonga tselatr'afo tamin'ny aterineto ny fahatapahan'ny herinaratra ankapobeny ka nahatonga adihevitra momba ny fipetraky ny herinaratra ao amin'ny firenena. Mangataka fanazavana momba ny fiverimberenan'ny fahatapahan-jiro tato anatin'ny volana vitsy lasa ny vahoaka. Nanao sarintany mampiseho ireo toerana iharan'ny fahatapahan'ny herinaratra ao amin'ny tanànan'i Phnom Penh City ny Urban Voice.